डाक्टर सुजितकुमारको हत्या कि आत्महत्या ! « Rara Pati
१७ भाद्र, काठमाडौं । रोबोटिक कलेजो प्रत्यारोपणका एक होनाहार डाक्टर सुजितकुमार शाह मृत्यूको खबरले आशङ्का पैदा गरेको छ । ४१ वर्षिय डाक्टर शाहले सेक्टर ४ को आठौं तलाको बाल्कोनीबाट हाम फालेको बताइए तापनि पुलिसले उनले कुनै सुसाइड नोट नछाडेको बताएको छ । यो घटना मङ्गलबार बिहान ३ बजे भएको थियो । ठूलो आवाज आएपछि सुरक्षा गार्डहरू त्यसतर्फ जाँदा उनी रगतको आहलमा परेको देखिन्थे । उनी २ वर्षदेखि HEWO अर्पाटमेन्टको सेक्टर ४७ मा रहेको फ्लाट नम्वर ८०१ मा एक्लै भाडामा बस्दै आइरहेका थिए ।
उनी सन् २०१६ देखि भारतको मेदान्त अस्पतालमा काम गरिरहेका थिए । विराटनगर निवासी डा. सुजित रोबोटिक कलेजो सर्जरी, रोबोटिक डोनर हेपाटेक्टोमी र प्रत्यक्ष कलेजो प्रत्यारोपणका एकदमै राम्रा विज्ञ थिए । उनले मेदान्त अस्पतालमा विज्ञका रूपमा रोबोटिक प्रविधिबाट कलेजो प्रत्योरोपणसम्बन्धी तालिम दिँदै आएका थिए । डाक्टर सुजितले रोबोटिक कलेजो प्रत्यारोपणका माध्यमबाट चिकित्सा जगत्मा निकै राम्रो ख्याती कमाइरहेका थिए ।
डाक्टर शाहले सन् २००५ मा मनिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सबाट नेपाल सरकारको पूर्ण छात्रवृत्तिमा एमविविएस पढेका थिए । उनले नेपालमा अनिवार्य २ वर्ष सेवा गरिसकेपछि पूर्ण छात्रवृत्तिमै चण्डिगढको स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवम् अनुसन्धान संस्थानबाट एमएस, दिल्लीको अल इण्डया इन्स्टीच्युट अफ मेडिकल साइन्सबाट एमसिएच गरेका थिए । उनी सानैदेखि उम्दा विद्यार्थी थिए ।
डाक्टर शाहको परिवारले यस घटनालाई आत्महत्या नभई हत्या नै भएको हुनसक्ने आशङ्का गरेको छ । त्यस्तै एम.वि.वि.एस. पढ्दाताकाका सहपाठी सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. रविन खड्काले एक होनाहार डाक्टरको यसरी मृत्यु भएकोमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । डा. खड्काले भने– “केहि दिन अगि आफूसँग फोनमा कुरा हुँदा सुजितले आफूलाई अमेरिकामा राम्रो अवसरका लागि बोलाइएको भए तापनि आफू नेपालमै आइ सेवा गर्न चाहेको कुरा बताएका थिए । आफ्नो देशप्रति र भविष्यप्रति त्यति धेरै आशावादी मानिसले आत्महत्या गरेको कुरा कल्पना समेत गर्न सकिँदैन । सुजित मृत्यू आशङ्कापूर्ण भएकाले निष्पक्ष रूपमा छानविन गरिनु पर्दछ ।”
टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार डा. शाह उनकी श्रीमतीसँग आपसी सम्बन्धको विषयमा कानुनी प्रक्रियामा थिए । पश्चिम बङ्गालमा काम गरिरहेकी उनकी श्रीमती पनि डाक्टर हुन । डाक्टर सुजितका ससुरालीहरू नोयडामा बस्दछन् । उनीहरूबाट जन्मिएकी ८ वर्षीया छोरी आमासँग बसिरहेकी छन् ।
यस घटनालाई कतिपयले भारतिय अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको झैं उनको पनि हत्या भएको भन्ने हुन सक्ने अड्कलवाजी गरेका छन् । अहिले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबिआई) ले अनुसन्धान अगाडि बढाइसकेको छ ।
के हो रोबोटिक कलेजो प्रत्यारोपण ?
बैज्ञानिक अध्ययनहरुले के देखाएको छ भने कलेजोको ओपन सर्जरीभन्दा रोबटिक सर्जरी बढी सफल देखिन्छ । यसलाई कम क्षति गरेर गरिने अपरेसन मानिन्छ । रिसर्च आउटरिचमा प्रकाशित एक आलेख अनुसार डा.मेजियाको अध्ययन अनुसार रोबोटिक सर्जरी लेप्रोसकोपिक र हातको माध्यमले गरिने सर्जरी भन्दा निकै बढी प्रभावकारी मानिन्छ । हातको माध्यमले गरिने सर्जरीमा औषत १८० मिनेट विरामी अपेरेसन थिएटरमा बस्नु पर्दछ । यो रोबटिक भन्दा ५० मिनेट बढी हो । यसमा कम खर्च, कम दुखाइ र सजिलो हुने मानिन्छ ।
डाक्टर सुजितकुमार शाह
हत्या कि आत्महत्या